सेप्टेम्बर ४, १९९८ लाई गुगलको जन्मदिन मानिन्छ । अस्ति भर्खर मात्रै गुगल १२ वर्ष पुगेर १३ लागेको छ । सर्च इन्जिनबाट सुरु भएको गुगल को यात्रा एन्ड्रोइड फोन हुँदै गुगल प्लस सम्म आइपुगेको छ । गुगलले सर्च देखि मोबाइल र सामाजिक सञ्जाल को क्षेत्रमा प्रयोगकर्ताहरुको वाहवाही पाइरहेको छ ।
१३ वर्ष अघि गुगल सुरु भो, जुनबेला हाम्रो देशमा ‘नेपाल पर्यटन वर्ष १९९८’ (Visit Nepal 1998) को नारा लागेको थियो, र मलाई इन्टरनेट, कम्प्युटर को केही ज्ञान थिएन । हुन त ईन्टरनेट नै भर्खर भर्खर विकास हुँदै गइरहेको थियो । गुगल को जन्म हुँदा याहु (Yahoo!) र एओल (AOL) को वर्चश्व थियो ।
गुगलका संस्थापकद्वय ‘ल्यारी पेज’ र ‘सेर्गे ब्रिन’ को भेट स्टान्डफोर्डमा सन् १९९५ मा भएको थियो र उनीहरुले १९९६ को जनवरी मा “ब्याकरब” नामक सर्चइन्जिन सार्वजनिक गर्ने विचार गरेका थिए । तर पछि उनीहरुको त्यही “ब्याकरब” गुगल सर्च इन्जिन मा परिवर्तन भयो । गणितमा गुगल (Googol) को अर्थ हुन्छ १ पछाडी सय वटा शुन्य । आज गुगल (Google) करोडौँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुको जिवनशैली बनिसकेको छ ।
संस्थापकद्वय पेज र ब्रिन ले सुरुमा ब्याकरब (BackRub) नामक सर्च इन्जिन सार्वजनिक गरेको भएपनि १९९७ को सेप्टेम्बर मा गुगलडटकम (Google.com) डोमेन लिएर आधिकारिक रुपमा गुगल को स्थापना गरेका थिए । गणितमा गुगल (Googol) को अर्थ १ पछाडी सय वटा शुन्य भएजस्तै गुगल ले अनगिन्ती कुराहरु समेटेको छ ।
१९९८: गुगल को पहिलो होमपेज
गुगलको आधिकारिक पेज नोभेम्बर १९९८ मा आएको थियो । गुगल ले लगानिकर्ताहरुबाट १ लाख अमेरिकी डलर को लगानि भित्र्याउन सफल भएको थियो ।
१९९९: अंकल साम होमपेज
गुगल ले आफ्नो पेजमा “अमेरिकी सरकारको दस्तावेज” हरु खोजी गर्नलाई “अंकल साम” लाई आफ्नो होमपेजमा अटाएको थियो । त्यसैवर्ष नै गुगल ले क्यालिफोर्नियमा आफ्नो कार्यालय खोलेको थियो। त्यसवर्ष पनि उनीहरुले २५ लाख अमेरिकी डलर को लगानी भित्र्याएका थिए ।
२०००: याहू को सर्च गुगलबाट
गुगल ले सुरुवाती का दिनमा याहू सँग सर्चको लागि साझेदारी गरेको थियो । सन् २००० सम्म आइपुग्दा गुगल ले १ बिलियन युआरएल (1 Billion URL) समेटेको थियो, अत: गुगल विश्व को सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिन बन्न पुग्यो । त्यसैवर्ष गुगल ले एडओर्ड (AdWord) कार्यक्रम पनि सुरु गर्यो ।
२००१: गुगल तस्विर खोजी
‘टेक्सट्’ (Text) अर्थात शब्दहरु मात्र सर्च गर्ने गुगल ले जुलाइ २००१ देखि तस्विरहरु (Google Image Search) पनि खोजी गर्न थाल्यो । २५० मिलियन तस्विरहरु गुगल ले ‘इन्डेक्स’ (Index) गरेर राखेको थियो । त्यसैवर्ष देखि गुगल समूह (Google Groups) पनि सुरु भएको थियो ।
२००२: गुगल ल्याव
सन् २००२ को सुरुवाती दिन मा गुगल ले “गुगल सर्च एप्लायन्स”, “हार्डवेयर” सार्वजनिक गर्यो । २००२ कै मे महिना मा गुगल ल्याव को स्थापना भयो ।
२००३: गुगल एडसेन्स र ब्लगर
सन् २००३ मा गुगल ले ‘एडसेन्स’ सार्वजनिक गर्यो । यसका अतिरिक्त गुगल ले ‘प्यारा ल्याब्स’ को ब्लगर पनि किन्यो।
सन् २००४ को अप्रिल १ मा गुगल ले आफ्नो ईमेल सेवा ‘जिमेल’ सार्वजनिक गरेको थियो । यसैवर्ष देखि गुगल ले सामाजिक सञ्जाल अर्कुट पनि सञ्चालनमा ल्याएको हो।
२००५: गुगल म्याप
गुगल ले सन् २००५ को फेव्रुअरी बाट गुगल म्याम सञ्चालन मा ल्याएको हो । आइफोनको लागि भने सन् २००७ मा सार्वजनिक गरिएको थियो । यसैवर्ष कोड गुगल (code.google.com) पनि सञ्चालन मा आएको हो । जुन महिनामा गुगल अर्थ सार्वजनिक गरेको गुगल ले अक्टोबरमा गुगल रिडर सार्वजनिक गरेको थियो । वर्ष को अन्त्यतिर गुगल ले ‘गुगल एनालाइटिक्स’ सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
अक्टोवर २००६ मा गुगल ले १.६५ बिलियन डलरमा युट्युव खरिद गरेको थियो । यसैवर्ष गुगल ले ‘गुगल ट्रेन्ड’ (Google Trends) पनि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अनलाईन खरिदका लागि गुगल ले “गुगल चेकआउट” को आरम्भ गरेको थियो ।
सन् २००७ मा गुगल ले मोबाइलको क्षेत्रमा ‘एन्ड्रोइड’ मार्फत हात हालेको थियो ।
२००८: गुगल क्रोम
२००८ को सेम्टेम्बरमा गुगल ले आफ्नो ब्राउजर गुगल क्रोम सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही वर्ष नै टि-मोबाइल ले ‘एन्ड्रोइड’ सिस्टममा मोबाइल बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
२००९: गुगल वेभ
गुगल वेभ आयो र गयो । सुरुमा केही चर्चा भएपनि, रियल टाइम मा चल्ने यो गुगल वेभ कसैले बुझ्न सकेनन् । गुगल वेभ सन् २००९ मा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
२०१०: गुगल बज
गुगल वेभ जस्तै, गुगल बज पनि आयो र गयो । गुगल बज ले कुनै चमत्कार गर्न सकेन । यसै वर्ष गुगल ले ‘एप्स मार्केटप्लेस’ पनि सार्वजनिक गरेको थियो, जहाँबाट ‘डेभ्लपरहरु’ ले आफ्ना एप्सहरु बेच्न सक्छन् । सोनी, इन्टेल र लजिटेक को सहकार्यमा गुगल टिभी बजारमा भित्रिएको थियो ।
२०११: गुगल प्लस
गुगल को सामाजिक हुने प्रयास स्वरुप आएको गुगल वेभ र गुगल बज ले खासै कमाल गर्न नसकेपनि, यसै वर्ष को जुन मा गुगल ले सार्वजनिक गरेको गुगल प्लस ले भने अनलाइनमा तहल्का मच्चाइरहेको छ ।
नोट: यो ब्लग मासावेलबाट साभार गरिएको हो!
Dilip Acharya August 1, 2012 at 11:59 AM
छोटोमा गगलको 'पूर्ण जानकारी !
Santoshlove20 August 1, 2012 at 11:59 AM
basant bc August 1, 2012 at 11:59 AM
Padhera ekdamai ramailo lagyo. Gooogle ko history thanks for postings tthis
Trekking In Nepal August 1, 2012 at 11:59 AM
Mero Pani Happy birth day to GOOGLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Nira_450 August 1, 2012 at 11:59 AM
Unperfectnewton Butperfect Nel August 1, 2012 at 11:59 AM
hapy birhday my best frn........for knowledge,search,entetinmaint,,,,,,,.........
sangesh August 1, 2012 at 11:59 AM
do you know google went to EXCITE.com and offer them their search engine.
google le 12 barsa ko umer ma katti pragati garya ta.... aafu 25 barsako lathe bhara ni kei garna sakiyena... :D